ZTE Axon 7, nyocha nke uru kacha elu kacha mma maka ego | Gam akporosis
ZTE Axon 7, nke a bụ elu-ọgwụgwụ gam akporo ama na nke kacha mma uru maka ego
Alfonso nke mkpụrụ osisi | | Nyocha, ZTE
ZTE Ọ na-ada otu nzọụkwụ n'azụ ndị asọmpi ya. Ebumnuche ya dị elu anaghị ere zuru ezu na Europe na, n'agbanyeghị nwere nnukwu azịza dịka ZTE Axon EliteAkpado akwa ya na akpachapu anya ya bu na ahia adighi dika aturu anya. Gịnị bụ ihe ngwọta ya? Ọhụrụ ZTE Axon 7, ọnụ nke rutere ahịa na ihe mmụta a mụtara.
Na ọha ndị Europe achọghị njedebe na agba ọla edo? Anyị na-edozi ya. Na ọdịdị ihu nke Axon Elite nso adịghị arụ ọrụ? Anyị megharịrị ọnụ iji nye ọmarịcha ama gam akporo ama na ọnụahịa dị egwu: euro 450. Ugbu a, m na-ewetara gị a ZTE Axon 7 nyochaa vidiyo, Obi abụọ adịghị ya na elu-gam akporo ama ama nwere uru kacha mma maka ego.
1 Design: metal dị na ejiji na ZTE Axon 7 ji nnukwu nganga na-eyi ya
2 Njirimara teknụzụ na elu nke njedebe dị elu
3 Uvo m masịrị m 4.0 dabara na ZTE Axon 7 nke ọma
4 AMOLED QHD ihuenyo, nchikota zuru oke
5 Ọdịmma ụda dị mma nke na-akpọ gị ka gị na ndị enyi gị kporie ndụ na fim
6 Nnukwu ihe mkpịsị aka mkpịsị aka
7 Ndozi ziri ezi
8 Igwefoto dị mma nke ga-ezute karịa atụmanya nke onye ọrụ ọ bụla
8.1 Ihe nlere nke foto na ZTE Axon 7
9 Nkwubi okwu ikpeazụ
9.1 ZTE Axon 7 Osisi Osisi
10 Uche ederede
Design: metal dị na ejiji na ZTE Axon 7 ji nnukwu nganga na-eyi ya
Omume nke iji ihe di elu na njedebe dị elu ọ bụ eziokwu: smartphones na ngwụcha aluminom bụ ebe a ka ịnọ. Mgbe Samsung kpebiri ịhapụ polycarbonate na ọkọlọtọ ya n'ọgbọ ole na ole gara aga, o doro anya na nke a bụ ụzọ aga. Na ZTE agaghị adị obere.
Mụta si emehie gara aga, dị ka na jọgburu onwe ya adịgboroja akpụkpọ anụ nke Axon J.Randall, Asia emeputa kpebiri nzọ na a unibody ahu mere kpamkpam nke aluminom ka nye ZTE Axon 7 nke mara mma ma dikwa nma.
N'ihe banyere ọrụ ọhụrụ nke ndị na-emepụta China anyị na-ahụ ekwentị emere nke aluminom, ọ bụghị akara plastik. Maka nke a, ha kpebiri ịgbaso ụzọ HTC setịpụrụ site n'inye ụfọdụ obere obere agha gbara gburugburu ọnụ na ọ bụ ebe antennas ekwentị dị, na-ezere imebi aesthetics nke smartphone.
Egwuregwu ZTE Axon 7 a Curvature nke na-eme ka ekwentị nwee mmetụta dị ukwuu n'aka. Ihe njide ahụ karịrị nke ziri ezi na, ọ bụ ezie na aka mkpuchi roba na-abata na igbe ahụ, anọ m na-eji ZTE Axon 7 na-enweghị nchebe ọ bụla ọ gbanyebeghị n'oge ọ bụla.
Ekwentị ahụ dị ezigbo mma, a na-ejide ya nke ọma, n'agbanyeghị nnukwu ihuenyo 5.5-anụ ọhịa, enwere ike iji ngwaọrụ ahụ n'ụzọ dị nkenke n'ihi nha ndị ejidere ya: ZTE Axon 7 Ọ tụrụ 151,7 x 75 x 7,9 millimeters.
Ọnụ ya siri ike, ya 185 gram nke ibu Ha kwadoro ya, ọ bụ ezie na ọ naghị enye nsogbu kwa ụbọchị. Na n'ihu anyị na-ahụ na ihuenyo na-ewe uru nke n'akụkụ n'ezie nke ọma, na-eru a ruru nke 72.2% ekele ntakiri okpokolo agba. Ma na-ewere na a ekwentị incorporates abụọ ọkà okwu na ya n'ihu, anyị ga-amata ezi ọrụ nke emeputa.
Igodo olu na bọtịnụ ngbanwu / gbanyụọ ekwentị dị n'akụkụ aka nri nke ZTE Axon 7. Igodo ndị a na-enye ezigbo njem na nguzogide nrụgide dị mma, na-eme ka ọla ha rụchaa nnukwu mmetụta nke ịdịgide adịgide.
Akụkụ aka ekpe bụ ebe anyị ga-ahụ oghere iji tinye kaadi SIM nano na kaadị micro SD, ebe na ala, ọ bụ naanị ụdị ọdụ ụgbọ mmiri C ka a na-akwụ ụgwọ ekwentị ahụ. Ugbua n'elu bụ ebe 3.5mm ọdịyo mmepụta.
ZTE mere ihe magburu onwe ọrụ na nke a, na-eke a ekwentị na a mara mma nke ukwuu imewe, àgwà kwuchara, oké adịgide na mmetụta na anyị na-emeso a n'ezie adịchaghị ekwentị. Na ịhụ uru ya, o doro anya na ihe ZTE Axon 7 gara n'ihu gụnyere oke kachasị elu na mpaghara ahụ.
Njirimara teknụzụ na elu nke njedebe dị elu
Nlereanya Axon 7
Usoro njikwa Android 6.01 n'okpuru akwa oyi akwa
Ihuenyo AMOLED 5.5 sentimita asatọ na Corning ozodimgba iko 4 nchedo / 2.5D technology na a Quad HD mkpebi nke 1440 x 2560 pikselụ iru 538 dpi
Nhazi Qualcomm Snapdragon 820 (cores abụọ Kryo na 2.15 GHz na cores abụọ Kryo na 1.6 GHz)
Nchekwa n'ime 64 GB gbasaa site na MicroSD ruo 256 GB
Igwefoto na-aga n'ihu 20 MPX nwere oghere nledo 1.8 / autofocus / Optical image stabilization / nchọpụta ihu / panorama / HDR / dual-tone LED flash / Geolocation / Ndekọ vidiyo na ogo 4K
Igwefoto ihu 8 MPX nwere oghere hiwere isi f / 2.2 / vidiyo na 1080p
Atụmatụ ndị ọzọ mkpisiaka ihe mmetụta / Dolby Atmos Technology / Ndenye Nchaji System / accelerometer / dara imecha
Batrị 3250 mAh na-enweghị ike iwepu ya
Akụkụ 151.7 x 75 x 7.9 mm
Ahịa 428 euro na Amazon
N'ileghachi anya na njirimara ọrụ ya o doro anya na ihe ZTE axon 7 bu anumanu. Ezie na ọ bụ eziokwu na Qualcomm ndondo emi ẹkenam Snapdragon 821, A ghaghi ikwu na ike nke ZTE Axon 7, gbakwunyere ya Nchekwa 4 GB Ram, toro ZTE ọhụrụ ọnụ na elu nke mpaghara.
Ekwentị na-arụ ọrụ nke ọma, Achọpụtaghị m ụdị lag ma ọ bụ nkwụsị ọ bụla n'oge na-adịghị anya, dịka m tụrụ anya ya, enwewo m ike ịnụ ụtọ egwuregwu ọ bụla na-enweghị nsogbu ọ bụla, n'agbanyeghị ụdị ibu ọrụ ọ chọrọ.
Uvo m masịrị m 4.0 dabara na ZTE Axon 7 nke ọma
Otu ihe kachasị amasị m gbasara ekwentị ZTE bụ omenala MI Favour oyi akwa. A nnọọ manụ, intrusive na bloatware-jupụta interface. N'ihe banyere ZTE Axon 7 ekwesịrị m ikweta na, ọ bụ ezie UI Na-amasị M 4.0 na-aga n'ihu na-edozi aesthetics nke ọnụ ya n'ụzọ dị ịrịba ama, enwere ike ịchọta myirịta ole na ole na gam akporo dị ọcha, nke bụ eziokwu bụ na ọ dị obere iwe karịa nsụgharị ndị gara aga.
Ọzọkwa ọhụrụ version nke omenala emeputa interface awade ọkwa dị elu nke nzuzo na oriri, igbochi ngwa ndị dị n’azụ ma gwa anyị banyere ya, nkọwa zuru oke masịrị m.
N'ụzọ dị otú a, anyị ga-eme ya hazie ka ngwa dị ka Spotify ma ọ bụ Instagram ghara imechi onwe ya, ma ozugbo anyị ahazi ihe ndị a, anyị ga-ahụ otú ndụ batrị si abawanye budata ekele maka usoro ihe a.
N'ikwu okwu banyere ọdịdị, My Favour enweghị ngwa drawer, na-eji sistemụ desktọọpụ nke a hụrụ na ihu ndị ọzọ nke ndị na-emepụta China bụ ndị na-ahọrọ ịhọrọ Apple Apple system. Agbanyeghị na enweghị m mmasị na azịza sitere na Cupertino, ekwesịrị m ịkọwa n'onwe m masịrị sistemu desktọọpụ karịa na drawer ngwa ahụ, agbanyeghị na-amasị gị agba ma cheta na ị nwere ike ịwụnye onye na-ebupụta ngwa ngwa nke na-enye gị ohere ịhazi ọrụ a.
Ma Ọkwa na mkpọchi ihuenyo na-ezo na a mgbịrịgba ekara icon, kama ákwà mgbochi nke mbụ. Sistemụ dị iche mana nke m werebeghị oge iji mara m. Nkwubi okwu m bụ na, ọ bụ ezie na mgbanwe dị mma bụ ihe dị ịrịba ama, enweghị m ọtụtụ mkpesa banyere interface ọdịnala a, ọ ka mma ka e jiri ya tụnyere nsụgharị ndị gara aga.
AMOLED QHD ihuenyo, nchikota zuru oke
ZTE nzo na Mkpebi QHD maka ọkọlọtọ ọhụrụ gị. N'ụzọ dị otú a, ZTE Axon 7 na-arịgo a AMOLED panel 5.5 anụ ọhịa na-enweghị ihe ọzọ na ihe na-erughị 538 pikselụ kwa inch. Ma mkpebi, nchapụta na ngosipụta nke agba pụtara ìhè mgbe ị na-agbanye ekwentị.
Maka nke a onye nrụpụta ị amanye saturation nke agba ka ọ bụrụ oke ịgba nke mere na ọ naghị amanye ya, na-eme ya nke ọma mgbe ị na-ahọrọ ogo agba agba zuru oke. Anyị nwere ike ịhazigharị ya mana ana m akwado ka ịhapụ ya ka ọ bụrụ ọkọlọtọ ebe ọ bụ na ọ bụ ebe agba ka edoziri.
Nsonaazụ zuru oke na a mkpebi dị elu karịa mkpa nke ahụ na-emekwa ka anyị gụọ ọtụtụ awa n’agụghị anya anyị. Rịba ama na ọkwa nchapụta zuru oke, inwe ike ịhụ ihuenyo ahụ n'enweghị nsogbu na ụbọchị anwụ na-achasi ike na akụkụ nlele ya karịrị nke ziri ezi.
con 319 nits nke elu nchapụta Ogwe a dị n'okpuru ogwe ndị ọzọ dị ka nke dị na Samsung Galaxy S7 Edge, mana ọ ga-ezuru iji mee ka ịlele ọdịnaya ọ bụla nke ọdịnaya ọ bụla bụ ezigbo obi ụtọ. Ọtụtụ n'ime uru a bara na ngalaba ọdịyo nke ZTE Axon 7, ike nke ọzọ nke ngwaọrụ ahụ.
Ọdịmma ụda dị mma nke na-akpọ gị ka gị na ndị enyi gị kporie ndụ na fim
Nke a bụ akụkụ nke ọtụtụ ndị nrụpụta na-eleghara anya. Ruo ugbu a, ọ bụ HTC na-achịkwa akụkụ a na ndị ọkà okwu ya mana ZTE jisiri ike karịa ndị na-emepụta Taiwan na usoro okwu ya. Tekinoloji Dolby Atmos.
Na nyocha vidiyo nke na-ebute isiokwu a, ahapụrụ m gị ihe atụ ka ị wee nụ ihe ezigbo ụda ndị ọkà okwu nke ZTE Axon 7 na, m na-agwa gị, bụ na-enweghị obi abụọ kasị mma na ahịa. Ha na-emegharị ụda gburugburu ma nye gị ohere ịnụ ụtọ ọdịnaya ọ bụla nke ọdịnaya ọ bụla ma ọ bụ egwuregwu vidiyo, na-enwe ekele maka nuances niile. N'ezie, etinyela olu ya na nke kachasị, wedata ya otu ka ụda ghara ịgbagọ.
Egosirila m ọtụtụ ndị ezi na ụlọ na ndị enyi ma ha masịrị ha niile. Site na ijikọ ekweisi a na-echekwa ogo ahụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji ike ya mee ihe kachasị mma, tinye ihe nkiri ma ọ bụ egwuregwu wee kpọọ ya na okwu okwu stereo iji hụ ohere nke ọdụ a. Ọrụ magburu onwe ya nke ZTE mere na nke a.
Nnukwu ihe mkpịsị aka mkpịsị aka
Na-amasị m na ihe mmetụta mkpisi aka Ọ dị na azụ ka ọnọdụ nke biometric Reader na ZTE Axon 7 yiri ka ọ bụ ihe ziri ezi. Ọ bụ ezie na gbasara ihe ndị na-amasị ya, agba.
Ọnọdụ dị mma ma dị mfe iru, njide nke ọnụ na-akpọ mkpịsị aka aka ka ọ dịrị na onye na-agụ ya. Ee, ọ bụ ezie ihe mmetụta ahụ na-arụ ọrụ nke ọma ị ga-ahụrịrị na ị debere mkpịsị aka gị nke ọma ebe ọ bụ na mgbe ụfọdụ ọ naara m ihe karịrị otu oge iji mepee ihuenyo ahụ. Na nke a, ihe ngwọta Huawei nọgidere, nke kachasị mma na ahịa.
Enwere ndị nrụpụta na-amanye gị ka ịgbanye ihuenyo iji kpọghee ekwentị, usoro m na-ewe iwe. Ọ dabara na ZTE Axon 7 ọ dịghị mkpa ka ịgbalite ihuenyo ịmegheIhe ị ga - eme bụ ịdabere na mkpịsị aka gị na onye na - agụ akara mkpịsị aka ya, ọ ga - emeghe ọnụ ya ozugbo. Mfe na ala
Ndozi ziri ezi
ZTE Axon 7 na-akpọ gị oku ka ị kpọọ egwuregwu ma lelee vidiyo na ihuenyo ya, ya na ụda olu ya dị egwu. Ma olee otu gi Batrị 3.250 mAh? Eziokwu bu na n'ime onu ogugu, na adighi iguzo nke ukwuu, obu ezie na odighi adi.
N'ụzọ dị otú a, site n'iji ya eme ihe, na nkezi nke 1 hour ma ọ bụ otu awa na ọkara nke Spotify, sọfụ ịntanetị na iji netwọk mmekọrịta na ọrụ izi ozi ozugbo, ekwentị adịru ụbọchị niile. na-abata n'ụlọ batrị 20-25%. Na-eme ọsọ ọsọ ntakịrị erutela m awa 7 na enyo.
Gaghị echegbu onwe gị banyere ekwentị ịhapụ gị dina ala n'ehihie, ọ bụ ezie na o yikarịrị ka ị ga-akwụ ụgwọ ya kwa abalị. Luckily ọ nwere ezigbo ngwa ngwa Nchaji usoro nke na-enye ohere ka anyị nwee 100% nke batrị ebubo na ihe karịrị otu awa. Na n'ime ihe dị ka nkeji 20 batrị ga-akwụ ụgwọ n'etiti 30 na 40% nke nwere ike ịzọpụta anyị karịa otu ọsọ ọsọ. Ekwuru m, nnwere onwe dị mma mana na-enweghị nnukwu ọfụma.
Igwefoto dị mma nke ga-ezute karịa atụmanya nke onye ọrụ ọ bụla
ZTE Axon 7 na-akwado a 20 megapixel Samsung ihe mmetụta n'azụ ya na oghere kachasị f / 1.8, nyocha ihu igwe na ezi nsonaazụ. Igwefoto ZTE Axon 7 na-eme nke ọma, na-ewere ọmarịcha gbaa na gburugburu ọkụ ma na-arụ ọrụ nke ọma n'ọnọdụ ọnọdụ dị ala.
Eziokwu bụ na igwefoto bụ isi nke ekwentị na-enye a arụmọrụ kacha mma na ezigbo ọsọ ọsọ mgbe ọ na-abịa ijide. Na mgbakwunye, ngwa ahụ zuru oke, na-enye ọtụtụ ohere dị n'ụdị nzacha na ọrụ ga-atọ ndị hụrụ foto ụtọ.
Dị ka ezigbo njedebe dị elu, na ZTE Axon 7 nwere ntuziaka igwefoto mode nke ahụ na-enye anyị ohere idozi oke ọ bụla iji were foto dị mma, na-enwe ike ịdị iche na mkpọtụ mkpọtụ, ọsọ na mkpuchi, ISO na ọrụ ndị ọzọ na-enye anyị ohere ịme ọtụtụ ohere nke igwefoto ya dị ike.
Na mgbakwunye na interface bụ nnọọ kensinammuo nke na-agwa anyị ka anyị jiri igwefoto na-egwuri egwu mgbe niile. Nlebara anya pụrụ iche na nsonaazụ sitere na nnukwu, ma na gburugburu ma ọ bụ ọkụ gbara ọkụ, ndị hụrụ n'anya ga-enwe afọ ojuju na nsonaazụ ahụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha ejiri usoro ntuziaka kwekọrọ.
La 8 megapixel n'ihu igwefoto Ihe kariri imezu oru ya site na ichota onwe gi nke ga enyere gi aka inweta uzo zuru oke site na ima nma. Na nkenke, nnukwu igwefoto na, na-enweghị iru ogo nke lens dị na LG G5 ma ọ bụ Galaxy S7 ma ọ bụ S7 Edge, ekwesịrị m ịsị na ọ tụrụ m n'anya maka mma.
Ihe nlere nke foto na ZTE Axon 7
Na-eburu n'uche nke ahụ na ZTE Axon 7 na-efu ihe na-erughị 450 euro Na ịhụ ike ya, nhazi na njirimara n'ozuzu ya, m ga-ekwu na ọ bụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma ịtụle. Enwere m obi ụtọ site na ogo ihuenyo ya na ụda dị egwu nke ndị na-ekwu ya.
Achọrọ m icheta onye m hụrụ n’anya HTC One M7 na otu ndị enyi m si enwere m anyaụfụ mgbe m gosiri ha ụda ya. Enwetara m ya na drọwa ahụ, bugoo ya ma jiri ya tụnyere ụda nke ọnụ abụọ ahụ na, ọ bụ ezie na onye mbụ so na One range na-aga n'ihu karịa ọtụtụ n'ime ọdụ ụgbọ mmiri ugbu a, nsonaazụ nke ZTE nwetara na nkebi a dị mma.
Na eziokwu ahụ bụ na akpụkpọ ahụ ọ na-eme anaghị adịkarị oke na-eme ZTE ka ọ si na ndị asọmpi ya. Ọ bụrụ na ọ soro ụzọ a, ekwenyesiri m ike na onye nrụpụta ndị China ga-abụ akara ngosi na mpaghara ahụ.
ZTE Axon 7 Osisi Osisi
Njedebe dị elu na ọnụego mgbanwe kachasị
Ihuenyo na-enye arụmọrụ dị mma
Soundda ụda nke ndị na-ekwu ya dị egwu
Agaghị eguzogide ájá na mmiri
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » ZTE » ZTE Axon 7, nke a bụ elu-ọgwụgwụ gam akporo ama na nke kacha mma uru maka ego
Ọ ga-amasị m ịmara ma ọ ga - ekwe omume ịme ọkwa ebe m na - akọwa etu m ga - esi gbanye Axon 7 ebe m gbalịrị ụzọ dị iche iche ma ọ gaghị ekwe omume na, enwere ike imelite ya nougat ebe mmelite ahụ apụtabeghị . Ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume, m ga-enwe ekele ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịgafe ụfọdụ njikọ / s iji nwee ike ịme ha abụọ.
PS: have nwere Axon 7 gbanyere mkpọrọgwụ?
Zaghachi Silvia Abascal
Nke a bụ Nokia 6, Nokia izizi nwere gam akporo
Meizu M3 Rịba ama, nyocha na echiche